Saturday February 08, 2020 - 11:13:33 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maamulka isku magacaabay Jubbalan ayaa bilaabay olole melleteri oo uu isaga difaacayo ciidamada dowladda Farmaajo ee maalmihii lasoo dhaafay la wareegayay degmooyin katirsan gobolka Gedo.
Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdi Rashiid Janan oo xilal sarsare ka haya maamulka Axmed Madoobe ayaa gaaray duleedka degmada Beled Xaawo iyagoo wata ciidamo aad u hubeysan.
Wasiirka amniga maamulka 'Jubbaland' iyo Maxamuud Sayid Aadan oo maleeshiyaad farabadan kula hadlay duleedka Beled Xaawo ayaa ku hanjabay in ay iska caabin doonaan wax ay ugu yeereen duullaanka Federaalka.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay dareemayaan abaabullo ciidan iyo dhiilla colaadeed arrimahaas oo keeni kara dagaal dhaxmaray maleeshiyaadka dowladda iyo kuwa maamulka Axmed Madoobe.
Cabdi Rashiid Janan ayaa taageera xooggan ka helaya melleteriga Kenya halka maleeshiyaadka dowladda Farmaajo ay taageero ka helayaan ciidamada Xabashida Itoobiya ee xoogga ku jooga deegaanno katirsan gobolka Gedo.
Khilaafka udhaxeeya Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo markii hore siyaasad ku koobnaa ayaa hadda isku bedelay mid melleteri waxaana laga yabaa in loollankan uu sababo in Itoobiya iyo Kenya isku qabtaan awood siinta dabadhilifyadooda.